क्वाटर नछाडेकाेमा वीपीका लेखा अधिकृतले डाक्टरमाथि गरे दुर्व्यहार ! - Action Khabar - Nepali Online News Portal
धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक लेखा अधिकृतले एक डाक्टरमाथि दुव्र्यहार गरेको आरोप लागेको छ । लेखा अधिकृत कमल रायमाझीले प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा. विप्लव कार्कीलाई मादक पदार्थ सेवन गरेर विभिन्न अपशब्द बोल्दै दुव्र्यहार गरेको उजुरी परेको छ ।
प्रतिष्ठानको कार्डियोलोजी विभागमा कार्यरत डिएम रेजिडेन्ट डा. कार्कीले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा जाहेरी दिँदै लेखा अधिकृत कमल रायमाझीले आइतबार साँझ ८ः३० बजेतिर आफु बस्ने आवासमा आइ जथाभावी गाली गलौज गर्दै धम्की दिएको बताएका छन् ।
डा. कार्कीले बेलुकी साँढे आठ बजेतिर कमल रायमाझी मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नो कोठामै प्रवेश गरी तथानाम गाली गरि मानसिक तनाव दिएको जिकिर गरेका छन् । सो बेला रायमाझीले भौतिक आक्रमण पनि गरेको उनको भनाई छ । ‘मलाई गाली गर्दा विभिन्न अपशब्दहरु समेत प्रयोग गरियो, जस्तैः तैंले मलाई नटेर्ने ?, तँलाई यहाँबाट तुरुन्तै निकालिदिन्छु, हेरम् तँ यहाँ कसरी बस्दो रहेछन् ? तँलाई तेरो औकात देखाइदिन्छु’ जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
डा. कार्कीले रायमाझीसँग के विषयमा विवाद भएको खुलाएका छैनन् । श्रोतले भने डा. कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको क्वाटर लेखा प्रमुख रायमाझीले केही दिनदेखि माग गरेका थिए । डा. कार्कीले क्वाटर नछोड्दा तनावमा रहेका रायमाझीले यसअघि पनि पटक पटक डर त्रास देखाउँदै आएको एक रेजिडेन्ट डाक्टरले भने ।
‘उहाँलाई कमल रायमाझी जो लेखा शाखाको कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँले केही दिनयता पटक–पटक क्वाटर खाली गर भनेर टर्चर गरिरहनु भएको थियो । वार्डेन म्यामले पनि उसलाई परीक्षा आइरहेको बेला चर्टर नगर भनेर सम्झाउँनु भएको रहेछ । तर, उहाँले प्रशासनको, भिसीको मान्छे भनेर थर्काउनु भयो ।’ उनले भने ।
कर्मचारीले अनाहकमा डाक्टरलाई दुव्र्यहार र धम्की दिएपछि भोलीबाट प्रतिष्ठानका रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले समेत इमरजेन्सी वाहेक सबै सेवाहरु बन्द गर्न सक्ने ती विद्यार्थीले बताए । ‘हामीले हाम्रो संगठनलाई घटनाको जानकारी गराइसकेका छौं । संभवतः भोलीबाट इमरजेन्सी वाहेक अन्य सेवाहरु बन्द हुन सक्छ । कोभिडको महामारीका दिनरात नभनी काम गर्ने डाक्टर माथि कर्मचारीले दुव्र्यहार गर्नु ठिक हैन ।’ ती डाक्टरले भने ।
डा. कार्कीलाइ असार ३० गते प्रतिष्ठानले ७ दिन भित्र क्वाटर खाली गर्न पत्र पठाएकाे छ ।
- ३ श्रावण २०७८, आईतवार २३:२५ मा प्रकाशित